pedometer - အဆင့်ကောင်တာ, tracker တွင်လမ်းလျှောက် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » pedometer - အဆင့်ကောင်တာ, tracker တွင်လမ်းလျှောက်
pedometer - အဆင့်ကောင်တာ, tracker APK ကိုလမ်းလျှောက်
Android အတွက်အခမဲ့ pedometer & အဆင့်ကောင်တာ app ကိုနှင့်သင်၏ခြေလှမ်းရေတွက်နှငျ့သငျရှို့မည်မျှကယ်လိုရီထွက်ရှာတွေ့သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်အကွာအဝေး။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခြေလှမ်းကောင်တာများနှင့်လမ်းလျှောက် tracker တွင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်သင်၏ဖုန်းတွင် Start - ကကဲ့သို့လွယ်ကူသောပဲ! သင် Start button ကိုတွန်းပြီးတာနဲ့သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးကိုသင့်အိတ်ကပ်နှင့်လမ်းလျှောက်အတွက်သင့်ရဲ့ smartphone ကိုတင်ထားသည်။ pedometer app ကိုသငျသညျရာ၌ခန့်ထားပြီခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်မှတ်တမ်းတင်နှငျ့သငျ, အကွာအဝေး, အချိန်နှင့်လက်ရှိမြန်နှုန်းကိုမီးရှို့ကြပြီကယ်လိုရီများ၏အရေအတွက်နှင့်အတူသူတို့ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပိုများသောခြေလှမ်းများနှင့်ကြာကြာအကွာအဝေးလည်းမီးမရှို့ပိုပြီးကယ်လိုရီညီမျှ! သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအခမဲ့ pedometer app ကို download လုပ်ပါနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခြေလှမ်းကောင်တာများနှင့်လမ်းလျှောက် tracker အတူ Fitter နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူနေမှုပုံစံမှကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးဒီနေ့သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူသွားပါ!
ဂျီပီအက်စ်နှင့်အတူ Real-time အတွက် * မြေပုံလေ့ကျင့်ခန်း & သင့်ရဲ့ပြင်ပလေ့ကျင့်ခန်းတိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်
* သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများအတွက်လမ်းကြောင်းအကွာအဝေး, ကြာချိန်, အမြန်နှုန်းနှင့်ကယ်လိုရီမီးလောင်တွက်ချက်, ခြေလှမ်းများ Count - မွငျ့မားတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်စစ်မှန်သောကာလ၌
* အယလေ့ကျင့်ခန်းအချုပ်ထဲမှာ, သင်လုပ်ခြေလှမ်းများ, အချိန်, အကွာအဝေး, ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းပျမ်းမျှအမြန်နှုန်း, max ကိုမြန်နှုန်းပျမ်းမျှနှုန်း, မြင့်အမြတ်, အမြန်နှုန်းနှင့်မြင့်နှင့်အတူဂရပ်များနှင့်သင်လမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူ map ကိုကြည့်ပါ
* ခြေလှမ်းများ, အကွာအဝေး, အချိန်နှင့်ကယ်လိုရီအဘို့အဆင့်မြင့်ဂရပ်များ4ကွဲပြားခြားနားသောကြားကာလ (အပတ်ကလတနှစ်နှင့်အားလုံး) အတွက်ကိုမီးရှို့
* pedometer & အဆင့်ကောင်တာ app ကိုသင်မှန်သင်တို့အဘို့ရဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး (ဖန်ဆင်းတော်ခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်, ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းအရေအတွက်, အကွာအဝေးခရီးထွက်သို့မဟုတ်တစ်နေ့တာအတွင်းအချိန်လမ်းလျှောက်) နှင့်သူတို့ပွီးမွောကျလာသောအခါအကြောင်းကြားစာအရခွင့်ပြုပါတယ်။
ကိုယ့် * ဘယ်သူမျှမကလက်ပတ်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောတခြား hardware မရှိက်ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ login အခမဲ့ pedometer ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးချက်ချင်းပဲသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုခြေရာခံကိုစတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလှမ်းကောင်တာများနှင့်လမ်းလျှောက် tracker တွင်သင့်ဖုန်းမှလုံးဝအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
* အဘယ်သူမျှမသော့ခတ်အင်္ဂါရပ်များ, ရှိသမျှ features တွေ 100% အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အပေးဆောင်စရာမလိုဘဲအားလုံး features တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
(5MB အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) * အသေးစားအရွယ်အစား
* အစာရှောင်ခြင်း, အလင်းနှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ app ကို
များကိုလှုံ့ဆော်နေဖို့ app ကြောင့် * အပြီးအစီးစိန်ခေါ်မှုများ
* အ pedometer & အဆင့်ကောင်တာ app ထဲတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်တမ်းများခြေရာခံထားပါ။
သငျသညျလမ်းလျှောက်အဖြစ်သင်သည်သင်၏တိုးတက်မှုကိုအသိပေး * Voice ကိုတုန့်ပြန်ချက်။ သငျသညျအကွာအဝေး / အချိန်နှုန်းစိတ်ကြိုက်ကိုလည်းမီးမရှို့သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းရေတွက်, အမြန်နှုန်းအရှိန်အဟုန်, အကွာအဝေး, အချိန်နှင့်ကယ်လိုရီထပ်ဆင့်လွှင်မှစိတ်ကြိုက်နိုင်သောတစ်ဦးကလှုံ့ဆျောသောစကားသံ။
- သူတို့ကသော့ခတ်ထားကြသောအခါအခြို့သော device များခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကိရိယာ၏သတ်မှတ်ချက်များအပေါ်သီးသန့်မူတည်ကြောင်း app ကိုတစ် bug ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
- ထိုခြေလှမ်းတန်ပြန်တိကျစွာခြေလှမ်းတွေခြေရာခံမဟုတ်လျှင်, pedometer ဆက်တင်ရှိ sensitivity ကိုချိန်ညှိပေးပါ။
pedometer - အဆင့်ကောင်တာ, tracker တွင်လမ်းလျှောက်
4.99 ကို MB